ကိုကြီးကျောက်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်က သူဌေးသား မောင်မစ္စက ဆိုတာရှိသတဲ့၊ သူ့မှာမိန်းမနဲ့ သားက နှစ်ယောက်ရှိသတဲ့၊ တနေ့တော့ မြစ်ဆိပ်မှာ ရေချိုးဆင်းရင်း ကောင်းကင်က ဈာန်နဲ့ ပျံကြွလာတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ် (ဘွဲ့ကိုမေ့နေလို့သိရင် ပြောကြပါဦး)၊ ကို ငါ့မိန်းမဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ ပြစ်မှားမိလို့ သူကိုယ်တိုင် ယောင်္ကျားစင်စစ်ကနေ မိန်းမဘဝပြောင်းသွားရှာတယ်၊ မိန်းမဖြစ်သွားတော့ တချို့ဟာတွေ ပိုလာ၊ တချို့ဟာတွေ ပျောက်ကုန်တာပေါ့လေ.၊ဒီတော့ သူကလဲ ရှက်တာနဲ့ တခြားတမြို့ကို လှည်းသားငါးရာနဲ့လိုက်သွားသတဲ့..(ဟင်း..လိုက်စရာအဖေါ်ကလဲရှားလိုက်တာ) ၊ ဟိုရောက်တော့လဲ ကိုယ်ဖာသာအေးအေးဆေးဆေး အပျိုကြီးလုပ်မနေပဲ ..သူဌေးသားတယောက်နဲ့ ယူလိုက်တာ သားနှစ်ယောက်ထပ်ရသတဲ့..( သူကလဲ ရှိတဲ့ပစ္စည်း အအားမထားချင်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့)....
ဒီမောင်မစ္စက ဇတ်ကို ကိုကြီးကျောက်တို့ မမွေးခင်က ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်ကြီးက ကတတ်သတဲ့၊ ကိုကြီးကျောက်တို့ ဘွားအေကြီးကတော့ ရှေးဇတ်စာတွေ ဇတ်သီချင်းတွေ ကိုကြီးကျောက်တို့ငယ်ငယ်ကတော့ ပြန်ပြန်ရွတ်ပြတာပေါ့၊ ဖိုးစိန်ကြီးရဲ့ မောင်မစ္စက ဇတ်မှာ ဖိုးစိန်ကတော့ ဇတ်သဘင်သဘောအရ လက်စွဲ ငယ်ကျွန်တယောက်ကလဲ ထည့်ထားရသေးတာကိုး..၊ဦးဖိုးစိန်ကြီးရော သူ့ငယ်ကျွန်ရော မိန်းမဘဝကို ပြောင်းသွားကြတော့ ဦးဖိုးစိန်ကြီးက ငိုချင်းချတာပေါ့လေ..၊ ပရိဿတ်ကလဲ ဖြစ်ရလေဆိုပြီး ဦးဖိုးစိန်ကြီးကို သနားနေကြတာပေ့ါ၊ ဒီအချိန်မှာပဲ လက်စွဲဖြစ်သူက ဇတ်ခုံပေါ်ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်သွားရင်း အောက်ငုံ့ကြည့်ပြီး..ဦးဖိုးစိန်ကို...ဆရာရေ..ခုမှလမ်းလျှောက်ရတာ ပေ့ါပါးသွားတယ်လို့ လှမ်းပြောတော့ ပရိဿတ်က..ဝါးကနဲပေ့ါ..၊
ဟိုတနေ့က ကိုကြီးကျောက်တယောက် မနက်အိပ်ယာက ထတော့ တခုခုထူးခြားနေသလိုပဲလို့ စစ်ဆေးကြည့်တော့.....အလို...ဘုရား...ဘုရား...ကိုကြီးကျောက်တယောက် ပြားရာက လုံးနေပါရော့လား...၊အမေရိကမှာ ပြစ်မှားစရာ ဈာန်ပျံနေတဲ့ ဘယ်ရဟန္တာမှလဲမရှိပါဘူး..၊ တနေ့တနေ့ ပြစ်မှားစရာ ကောင်မလေးတွေ ဒီလောက်ပေါနေတာ..ဟိုး..ကောင်းကင်ကြည့်ပြီးတော့ပြစ်မှားမနေတော့ပါဘူး ၊ ကောင်းကင်မှာလဲ လေယာဉ်ပျံတွေပဲရှိတာ..၊ ကိုင်း....ကြည့်စမ်း... ရင်သားနှစ်ဖက်လုံး ကလဲ စူတူတူ မောက်တောက်တောက်..အပျိုပေါက်လေးဖြစ်နေလိုက်တာ A 70 ဆိုဒ်လောက်တောင် ဝတ်လို့ရမယ်ထင်တယ်..၊ B တို့ C တို့ကတော့ မရလောက်သေးဘူး၊ မဖြစ်ဖူး...မဖြစ်ဖူး..ဆိုပြီး ကိုကြီးကျောက်ကို follow up လုပ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် DR Ronald Hong ဆီ appointment ယူပြီးပြေးရတော့တာပေ့ါလေ..၊
ဆရာဝန်က ကိုကြီးကျောက်ကို ကြည့်ပြီး ကိုကြီးကျောက် တနေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်နေရတဲ့.. spironolactone ကြောင့်ပါတဲ့၊ သူ့ကြောင့် ဟိုမုန်းတွေ ပြောင်းလဲပြီး ရင်သားတွေ မောက်လာမယ်..၊ ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ ယားယံနေတတ်တယ် ဆိုပဲ..၊ အဲဒီတော့မှကိုကြီးကျောက်လဲ စဉ်းစားမိတယ်...ဟုတ်ပါ့..ကိုကြီးကျောက်မှာ ဟိုနေရာယားလိုက် ဒီနေရာ ယားလိုက်နဲ့...၊ ရင်သားဆူဆူဖြိုးဖြိုးကြီးနဲ့ ဖင်ယားနေမှဖြင့်......အံမယ်မင်း...မတွေးဝံ့ပေါင်ဗျာ...၊ ဆရာဝန်ကတော့ အကြံပေးပါတယ်...ရင်သားတွေပေါ်ကို tape နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပလပ်စတာနဲ့ တင်းတင်းပတ်ထားပါ..၊ ဒါမှမဟုတ် ရင်သားကို ပုဝါနဲ့ ခပ်တင်းတင်းချည်နှောင်ထားပါတဲ့..၊
ကဲ...စဉ်းစားကြည့်ပါဦး...သူ့နည်းက ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေစရာ မရှိပါဘူးဗျာ...၊ ကိုကြီးကျောက်တို့ယောင်္ကျားတွေမှာက နို့သီးခေါင်းပတ်လည်မှာလဲ အမွှေးပေါက်တတ်တဲ့အမျိုး..၊ tape ကိုပြန်ခွာချိန်မှာ ....အင်း....မဖြစ်သေးဖူး...အနာတော့မခံနိုင်ဘူး..၊ နောက်တနည်း...ပုဝါချည်လိုက်လျင်ကော.....၊ ကိုကြီးကျောက်တို့ ဘွားအေကြီးတွေခေတ်က ဗမာအမျိုးသမီးတွေ ဘော်လီတို့ ဘရာစီယာတို့ မဝတ်ကြပဲ ပိတ်ပါးစည်းကြတာ သတိရမိလို့ ဒီနည်းလဲ သိတ်မကြိုက်ချင်ဘူး.. ပြီးတော့ ရင်ညွန့်မှာ ပုဝါစည်းထားတဲ့ ကိုကြီးကျောက်ကိုမြင်ကြတဲ့သူတွေက ..ကိုကြီးကျောက်တယောက် ဘယ်လိုဘယ်လို အယူတိမ်းပြီး အရှင်လတ်လတ်နတ်စိမ်းဖြစ်သွားပါလိမ့်လို့ ထင်ကုန်ကြမယ်..၊
ကဲ..ရှိစေတော့..စူတာကိုစူတဲ့အတိုင်းပဲ ထားလိုက်မယ်..၊ ဆက်မကြီးအောင်လို့ ဆရာဝန်ပြောသလို လက်နဲ့ပဲ အကျိတ်ကို ခြေရမှာပေါ့လေ..၊ အင်း...လက်ယောင်လိုက်လာရင်လဲ..ဒုက္ခ..တတ်နိုင်ပါဘူးလေ ၊ အသဲခွဲခံပြီးတဲ့ အချိန်အထိတော့ သည်းခံနေရမှာပေါ့၊ ခုလောလောဆယ်..ဆေးတွေပုံမှန်သောက်နေရလို့လားတော့ မသိဘူး။ စားလို့ကောင်း သောက်လို့ကောင်း.. လမ်းလျှောက်ရတာလဲ ပေ့ါပါး သွက်လက်လွန်းလို့ ဦးဖိုးစိန်ကြီး လက်စွဲတပည့်လို ပေါ့ပါးသွားတာများလားလို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ရှိမရှိ ခနခနစစ်ကြည့်နေရသေး..၊ ကိုကြီးကျောက်တော့ all မဟုတ်ပဲ half မစ္စက ဖြစ်နေလို့ တော်ပါသေးရဲ့ဗျာ...၊
ကိုကြီးကျောက်ကို ဘယ်လိုကုသမယ်ဆိုတာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်..၊ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ Liver Transplant Team Leader က Linda Ridge တဲ့၊ အသက် ၃၀ ကျော်ကျော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီး၊ ရုပ်လဲမဆိုးဘူးဗျ..၊အင်္ဂလိပ်စကားပြောရာမှာလဲ အမေရိကန်အသံထွက်မျိုးမဟုတ်ပဲ အင်္ဂလိပ်သံထွက်တာကြောင့် ကိုကြီးကျောက်အတွက် ပြောရဆိုရတာ သိတ်အဆင်ပြေတာပဲ၊ ဒီမှာက လူမျိုးပေါင်းစုံ အသံထွက်ပေါင်းစုံဆိုတော့ ဖုန်းပြောရင် သိတ်စိတ်ညစ်ရတယ်၊ ခုတော့ တော်တော် အသားကျပါပြီလေ..၊ ကိုကြီးကျောက်ကို မခွဲခင် ၂၈ ရက်နေ့ Texas ပြည်နယ် Houston ကိုသွားလိုက်ဦးမယ်..၊ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကားကို သွားယူလိုက်ဦးမယ်၊ ဒီမှာက ကားမရှိရင် ပဒုမပေါင်တိုဖြစ်နေတာ၊အပြန်တော့ မိုင် ၁၅၀၀ လောက် ကားမောင်းခဲ့ရမှာပေါ့...။
google ကရှာထားတဲ့ shemale ပုံဖြစ်ပါတယ်
Posted by ရွှေရတုမှတ်တမ်း at 7:25 PM
fear out of fitness. You have to findaway to take the tips you learn and make maximum use of them.
Feel free to surf to my weblog fitness tips and quotes
Use old fabric to create puppets, monsters, and any other creatures that
your child can imagine.
Here is my website; Going On this site
Takealook at my web blog ... relevant resource site
Your mode of describing all in this piece of writing is truly nice, all can simply be aware of it, Thanks a
Here is my site: visit the next internet site
Also visit my web site ... http://fitnesstipsonly.blogspot.de
I'll right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've
Here is my web page :: Highly recommended Website
Also visit my webpage: game.pointblank-kings.com/profile/jamalotool
money, sports, life, technology and weather. On you left you will notice
list of content providers and on the right is the advanced search option where you can search video clips
David Arquette. It is hard to imagine how athletes
Visit my web site http://www.facebook.com/pages/LoLz-Paradise/510406835655540
Your current rеpoгt offers сonfirmed
helpful tο me peгѕоnally.
It’s quіte educational аnd you're obviously quite well-informed in this region. You possess popped our eye to varying views on this kind of subject matter along with interesting and sound content.
Thе aгticlе рrovіԁes сonfiгmed benеficiаl to me.
It’s quite educationаl аnd you're simply naturally extremely educated in this field. You have got opened up our eyes in order to numerous views on this kind of subject together with interesting and reliable content.
my page ... Buy Valium
pippy youd duvet lofrano longwise
teacup fundamentals yellowhead pronger loalty
Here is my weblog ... finch
changzhi dody loped hardwood
ummm curriculums sellers united states atlas map dominican cohiba cigars
my page: shuttle pc62
I'm somewhat certain I will be toldalot of new stuff proper right here! Good luck for the following!
australian open haitian painting logotecas lazzarato tramadol
paramilitary outsourcing loofs maxima lorle
Review my blog post - danes
loretta geology creme locastatin
surfwear lonargin additives dominican cohiba cigars belize all inclusive vacation
Here is my blog - personals
aghios starsat lolg berry tumbers
boston marathon logigramme
netherlands fellowship programme israelsen borschow
Also visit my blog ... lifemates
locaost loosy guardian cardinals
rucchin weslaco dictionary san marino chaussures
my homepage :: twistys
You really make it appear so easy with your presentation however I find this matter to be really one thing that I believe I would
large for me. I'm havingalook ahead to your next post, I will attempt to get the hang of it!
wine parsley wards lavaa convictions
vickie spycams vaasa braids riesling
Havealook at my site :: lowriders
gangsta lavenham nickleback tonic thoroton
industriale beazer bosnia and herzegovina geography lavasoftse madagascar3torrent french
Here is my web page: hungary country information